Huawei weputara P30 Pro na igbe onyinye ma kpuchie ya na Swarovski | Gam akporosis
Huawei weputara nsụgharị nke P30 Pro na igbe onyinye na-egbu maramara na ikpe akwara na kristal Swarovski
El P30 Pro Ọ bụ Huawei kasị dị ike ma na-ewu ewu ama ebe ọ bụ na e mere ukara na njedebe nke March tinyere P30, nke bụ isi nlereanya nke usoro isiokwu a nke P30 Lite. Kemgbe ahụ, ọ natara ọtụtụ otuto maka igwefoto ya, nke dị n'elu ndepụta DxOMark dịka nke kachasị mma.
Na mgbakwunye inwe ọmarịcha foto ngalaba, ọ na-eyikwa ejiji mara mma, nke dara oke ọnụ ma na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụ ezie na ọdịdị nke ekwentị anaghị ahapụ ọtụtụ ihe achọrọ, Huawei ugbu a na-enye a variant nke ya na a pụrụ iche igbe na-echebe mkpuchi fesa na Swarovski kristal., nke na-enye ya ọhụụ dị egwu ma dị egwu, nke dị mma maka ndị chọrọ ka ihe onwunwe ha pụọ ​​n'etiti igwe mmadụ ahụ n'ụzọ jọgburu onwe ya.
Huawei kpọrọ mbipụta a 'Huawei P30 Pro Limited Edition Pearl White na igbe onyinye pụrụ iche na ikpe mara mma'. O doro anya na anyị na-eche aha nke na-adịghị mkpụmkpụ ma na-agwụ ike. Ọ na-abịa na igbe onyinye onyinye pụrụ iche ma dị na UAE (United Arab Emirates) na Saudi Arabia. N’ime igbe na-egbuke egbuke ka nsụgharị ekwentị nwere 8GB RAM + 128GB nke ebe nchekwa dị n’ime.
Huawei P30 Pro Limited Edition Pearl White na igbe onyinye pụrụ iche na ikpe mara mma
Ekwentị nke mbipụta a dị na 2,599 UAE dirham na Saudi riyal (~ 707 na 618 euro, n'otu n'otu) na dị na ọnụọgụ dị oke. Ọ bụrụ na i nweela Huawei P30 Pro dị ka nke a, ịnwere ike ịzụta ikpe ahụ iche maka AED 499 (~ € 121 ma ọ bụ $ 135).
Ọ ga-adị na ụlọ ahịa tupu August 8, n'oge maka ememme Eid al-Adha nke mpaghara ahụ, nke bụ Sọnde na-abịa. Nwere ike ịtụ ya na ntanetị, mana Huawei kwuru na iwu enyere mgbe August 6 gafere na August 14.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei weputara nsụgharị nke P30 Pro na igbe onyinye na-egbu maramara na ikpe akwara na kristal Swarovski
Ihe osise ndị a gosipụtara njirimara nke Samsung Galaxy Note 10
Google ga eji ihe eji emegharị emegharị na ekwentị ya na 2020